ISGIE MADAGASCAR: Hanoro-lalana ny mpianatra momba ny asa
Lynda ANDRIATSITONTA isgie madagascar, mada jeune	0 Commentaire fév 28, 2018
Manana tolotra manokana ho an’ireo mpianatra vao hiditra taona voalohany ny fianarana ambaratonga ambony ISGIE (Institut Supérieur de Géologie, de l’Ingénieur et de l’Environnement). Maimaim-poana ny saram-pianarana ho an’ireo manoratra anarana hatramin’ny 12 martsa 2018. “Tsy mandoa saram-pianarana izy ireo mandritra ny dimy volana ». Ankoatra izany, hanatanteraka famelabelarana ny ISGIE amin’ny 07 martsa 2018 ho avy izao ao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely. Hampahafantatra ny mpianatra vao afaka fanadinana bakalorea ny lalam-piofanana misy ao aminy ity fianarana ambaratonga ambony ity. Hanazava amin’izy ireo ny sehatr’asa azo atao mifanaraka amin’ny lalam-piofanana safidiany ihany koa ny tomponandraikitra amin’io fotoana io.
Mampiofana momban’ny tontolo iainana, harena an-kibon’ny tany, BTP, « géologie » ny ISGIE. Misokatra ho an’ireo manana diplaoma bakalorea A C D G Technique na ireo efa manana « licence » ka te hanao fandalinana(spécialisation) momban’ireo lalam-piofanana ireo ny oniversite. Marihina fa nandray anjara tamin’ny « salon de l’étudiant » izay nokarakarain’ny Mada jeune tao amin’ny Lapn’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 22 sy ny 23 febroary 2018 ny sekoly.
‹ JONO: Hohatsaraina ny fidiram-bolan’ny mpanjono	› SALON DES ÉTUDES INTERNATIONALES : Des bourses à octroyer